Bogga ugu weyn > Kordhinta ugu fiican ee Nootropic ee Alpha GPC sanadka 2021
Aragtidayada, kaabista ugu fiican ee nootropic ee Alpha GPC sanadka 2021 ee adeegsiga shaqsiyeed waa Cofttek Alpha GPC. Waxa ugu fiican ee ku saabsan kaabiskan ayaa ah inay tahay wax soo saarka khudradda / khudradda sidaa darteedna, qof walba wuu qaadan karaa. Waxaa taas ka sii muhiimsan, kaabista kuma jiraan qamadiga, gluten, caanaha, ukunta, kalluunka, iyo lowska. Waxay, sidaa darteed, sidoo kale ku habboon tahay cunnida dadka qaba xasaasiyadda. Si kastaba ha noqotee, haddii aad leedahay xaalado horay u sii jiray, waa inaad marka hore la hadasho dhakhtarkaaga. Tani dhamaystirid waxay uruurisay kaliya dib u eegis togan waxayna si sax ah u sameysay waxa ay sheeganeyso inay sameyso.
Muxuu u wanaagsan yahay Alpha GPC?
Mudo intee le'eg ayay ku qaadanaysaa Alpha GPC inuu shaqeeyo?
Alpha GPC miyuu ku daalaa?
Maskaxda Alpha ma leedahay waxyeellooyin?
Miyaad wada qaadan kartaa Alpha GPC iyo CDP choline?
Alpha GPC ma dabiicibaa?
Maskaxda Alpha ma nabad qabtaa?
Mudo intee le'eg ayay saamaynta maskaxda Alpha sii jirtaa?
Maskaxda Alpha runti ma shaqaysaa?
Joe Rogan ma leeyahay maskaxda Alpha?
Maskaxda Alpha ma sharci baa?
Waa maxay kaabista ugu wanaagsan ee Nootropic?
Waa maxay kaabista maskaxda ugu fiican?
Alpha GPC miyuu kordhiyaa HGH?
Choline miyay keentaa niyad jab?
Maxay kujirtaa maskaxda Alpha?
Miyuu CDP choline amaan yahay?
Waa maxay saamaynta Noopept?
Alpha GPC miyuu kordhiyaa dopamine?
Sidee dhakhso ah ayuu u shaqeeyaa Alpha GPC?
Waa maxay astaamaha lagu garto choline la'aanta?
Choline miyuu ku fiican yahay walaaca?
Waa maxay isha ugu fiican ee choline?
Sideen ku heli karaa choline si dabiici ah?
Sideed ugu tijaabisaa yaraanta choline-ka?
Muxuu dhadhamiyaa Alpha GPC?
Cunnooyinka dheellitiran ee choline waxtar ma leeyihiin?
Citicoline ma la mid yahay choline?
Waa maxay farqiga u dhexeeya choline iyo phosphatidylcholine?
Choline miyuu walaac keenayaa?
Miyuu choline kordhiyaa serotonin?
Waa maxay dhibaatooyinka ay keento choline-ku?
Choline miyey ku siisaa tamar?
Lecithin miyuu ku fiican yahay walaaca?
Waa maxay waxyeelooyinka Alpha GPC?
Miyaa Alpha GPC biyo ama dufanku liqi karaa?
Maskaxda Alfa ma aamin tahay in la isticmaalo?
Kaabisyada maskaxda ma shaqeeyaan?
Nootropics ma sababi kartaa madax xanuun?
Choline aad u tiro badan waxyeelo ma yeelan kartaa?
Miyaad qaadan kartaa Alpha GPC maalin kasta?
Nootropics ma aamin yihiin?
Waa maxay kiniinka maskaxda ee ugu fiican suuqa?
Kafee ma Nootropic baa?
Nootropicskee runti shaqeeya?
CBD ma Nootropic baa?
Maxay yihiin Faa'iidooyinka Alpha GPC?
Alpha GPC maamulku wuxuu kordhiyaa sii deynta neurotransmitter acetylcholine wuxuuna fududeeyaa barashada iyo xusuusta. Ciyaartoyda, kaabista Alpha GPC waxay ka hortageysaa hoos u dhaca jimicsiga ee heerarka choline, waxay kordhisaa waxqabadka adkeysiga iyo dheecaanka hoormoonka koritaanka.
Alpha GPC wuxuu wax ku ool u yahay kordhinta soosaarka xoogga jirka ka dib 6 maalmood oo dheeri ah. Tababarayaasha waxqabadka isboortiga ayaa tixgelin kara ku darista Alpha GPC cuntada xawaaraha iyo awooda cayaaraha si loo xoojiyo waxqabadka muruqyada.
Waxay kaa dhigeysaa mid aad u daallan habeenkii, laakiin tani macno ayey u samaynaysaa sababtoo ah shaqada tayada sare leh ee ay maskaxdaadu qabatay maalintii. Dabcan, waxaad ubaahantahay inaad seexato si maskaxdaadu si buuxda ugula socodsiiso xusuusta aad sameysay maalintii oo dhan.
Dhibaatooyinka soo raaca ee maskaxda Alpha waa mid aad u yar. Iyada oo ku saleysan tijaabada bukaan-socodka ee Alpha Brain iyo caddaynta, ma jiraan wax warbixin ah oo ku saabsan saameynta xun ee kaabista.
Labadan koronto ee dheeraadka ah si fiican ayey u wada shaqeeyaan. … Alpha GPC waa soosaarid fosfatidylcholine (PC). Iyo CDP Choline oo dheeri ah ayaa bixisa uridine loo baahan yahay isku-dhafka PC. Marka la isku daro, waxaad siineysaa maskaxdaada nooca choline ee ay u baahan tahay isla marka la eego heerka gacanta.
Alpha GPC waa mekole dabiici ah oo ku dhaca maskaxda dhexdeeda. Nafaqadan muhiimka ah, ee sida dhow ula xiriirta qoyska B-fiitamiinka, waxay si gaar ah ugu dhex noolyihiin unugyada neerfaha.
Alpha Brain waa mid ka mid ah kuwa ugu nabdoon kaabis nootropic. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa inaad la kulanto waxyeelo yar yar marka la eego isdhexgalka daawada ama markaad isticmaasho wax ka badan intii loo baahnaa. Taasi waa sababta ay tahay inaad ku dhegto qiyaasta lagu taliyey oo aad la tashato dhakhtarkaaga ka hor intaadan qaadan wax dheeraad ah oo nootropic ah.
Maskaxda Alpha waxay socotaa in ka badan 6 saacadood. Sida laga soo xigtay qaar ka mid ah dib-u-eegista madax-bannaan ee maskaxda Alpha, saameyntu waxay socon kartaa in ka badan 7-8 saacadood.
Isticmaalka maskaxda Alpha muddo 6-toddobaad ah waxay si weyn u wanaajisay xusuusta afka dhow iyo howlaha fulinta markii la barbardhigo kontaroolada, koox ka mid ah qaangaar caafimaad qaba oo da'doodu tahay 18-35. Natiijooyinka tijaabadani waxay mudan yihiin daraasad dheeri ah oo ku saabsan codsiga kor u qaadista garashada supplements waxqabadka ciyaaraha fudud.
Joe Rogan wuxuu gacansaar la leeyahay shirkad la yiraahdo Onnit, oo abuurta Alpha Brain, oo ah wax soo saar loogu talagalay in lagu hagaajiyo soo celinta hadalka iyo dhameystirka howsha. Alpha Brain sidoo kale waa mid ka mid ah wax soo saarka suuqa ee leh tijaabooyin caafimaad waxaana Rogan aaminsan yahay inay ka caawinayso inuu dib u xasuusto ereyada iyo odhaahda ka fiican placebo.
Aasaasihii Onnit Aubrey Marcus isaga oo ka hadlaya xaaladdan waxa uu yidhi: “Waxaan odhan karnaa si hufan in astaamaha amphetamines ama waxyaabaha kale ee mamnuuca ah aysan ku jirin maskaxda Alpha. Waxaan si xushmad leh u tijaabineynaa dufcad kasta oo maskaxda Alpha ah annaga oo iska bixineyna kharashkeena si aan u hubinno in alaabtayadu ay ka madax bannaan yihiin walxaha mamnuuca ah ama sharci darrada ah.
Alpha GPC waa qalab dabiici ah oo jira oo laga helo maskaxda. Xaruntan ayaa sidoo kale la siidaayaa marka aysiidha dufan leh ee laga helo soy iyo dhirta kale ay jabaan. In kasta oo Alpha GPC ay si dabiici ah ujirto, xagga isku-uruurinta iyo tirada dabiiciga ah, kuma filna in la qabto shaqooyinka loogu talagalay in lagu taageero. Sidaas darteed, Alpha GPC waxaa badanaa loo qoraa isticmaalka qaab dheeri ah oo nafaqo leh oo ay ku jiraan Alpha GPC oo laga soo saaray midkood kiimikada ama kala-goynta enzymatic ee fosfatidylcholine soya fosforipids.
Cilmi-baarista lagu sameeyay Alpha GPC sanadihii la soo dhaafay waxay u aasaastay inay tahay horudhac parasympathomimetic acetylcholine oo kicinaysa nidaamka neerfaha ee parasympathetic sidaas darteed, waxay si firfircoon uga caawisaa daaweynta cudurka Alzheimers iyo noocyada kala duwan ee waallida. Alpha GPC sidoo kale waa waxsoosaarka ugu waxtarka badan ee choline sidaas awgeedna, kaabayaasha ay ka kooban tahay dhismahani waxay u adeegaan ilaha cuntada cuntada. Choline waa nafaqo lagama maarmaan ah oo jidhku u baahan yahay inuu qabto dhowr hawlood oo muhiim ah, sida koritaanka gacanta iyo dheef-shiid kiimikaadka. Alpha GPC sidoo kale waa nootropic wax ku ool ah oo kor u qaada shaqada garashada maskaxda. Sidaas awgeed badanaa waxaa loo qoraa bukaanada waayeelka ah ee la kulma hoos u dhaca garashada. Qaadashada Alpha GPC waxay sidoo kale kordhin kartaa wax soo saarka hoormoonka koritaanka jirka gudihiisa sidaas darteedna, ciyaartooyda ku hareeraysan shaqada waxay adeegsadaan dheellitirka Alpha GPC si kor loogu qaado wax soo saarkooda guud.
Waxyaabaha loo yaqaan 'Alpha GPC supplements' waxay la yimaadaan dhowr waxtar oo suurtagal ah. In lagu bilaabo, Alpha GPC waxaa loo yaqaanaa inuu hagaajiyo caafimaadka maskaxda iyo shaqada. Waxay ku sameysaa iyada oo kordhinaysa heerarka dopamine jirka. Daraasado dhowr ah ayaa sidoo kale isku xirey dhismahan iyadoo la wanaajiyey shaqada xusuusta iyo awoodda barashada. Xaaladaha qaarkood gaar ahaan, alfa GPC supplements ayaa sidoo kale awood u yeeshay inay soo celiyaan xusuusta in kasta oo kiisaska noocaas ahi ay fog yihiin oo ay yar yihiin. Marka laga reebo hagaajinta maskaxda iyo shaqooyinka garashada, waxaa jira caddeyn ku filan oo caddeynaysa in Alpha GPC loo isticmaali karo daaweynta Alzheimer, noocyada kala duwan ee waallida, iyo weerarada is-goysyada ku-meel-gaadhka ah. Xarunta waxaa sidoo kale isticmaala ciyaartooyda maadaama ay kor u qaadeyso wax soo saarkooda. Gabagabadii, alpha GPC wuxuu leeyahay faa'iidooyin dhowr ah oo la aasaasay, waa qodob muhiim ah oo ku daray caankiisa sanadihii la soo dhaafay.
Alpha GPC waa horudhac acetylcholine ah oo suurtagal ah in uu kordhiyo dheecaanka hoormoonka koritaanka iyada oo loo marayo ficilka acetylcholine-kicinta catecholamine.
Kama helin wax ururo muhiim ah falanqaynta u dhiganta ee xiriirka ka dhexeeya choline plasma iyo calaamadaha niyadjabka. Daraasaddan ballaaran ee ku saleysan dadweynaha, uruurinta choline waxay si xun ula xiriirtay astaamaha walwalka laakiin ma ahan calaamadaha niyadjabka.
Alpha Brain waxay leedahay laba waxyaalood oo kor u qaadaya heerarka acetylcholine: GPC choline, oo jidhku u beddelo acetylcholine, iyo Huperzine A, oo ah alkaloid ka soo jeeda mooska naadiga Shiinaha, oo sidoo kale loo yaqaan Huperzia serrata.
CDP choline waa daawo badbaado leh, sida tijaabooyinka sunta ah ay muujiyeen; wax saameyn ah oo daran kuma lahan nidaamka cholinergic-ka waana la adkeysiin karaa.
Dhibaatooyinka ka imaan kara noopept waxaa ka mid ah khalkhal hurdo (5/31 bukaan), xanaaq (3/31), iyo cadaadis dhiig oo kordhay (7/31) (Neznamov iyo Teleshova, 2009). Farsamooyinka waxqabadka ee ka soo baxa cilmi-baarista hore Hal daraasad oo ku saabsan jiirka ayaa lagu soo warramey in noopept uu ka gudbay caqabadda maskaxda maskaxda.
Waxaa laga yaabaa inay suurtogal u tahay Alpha GPC inuu hagaajiyo sameynta xusuusta iyo inuu xoojiyo awoodda barashada. Alpha GPC sidoo kale waxay kor u qaadi kartaa heerarka dopamine, taas oo waxtar u leh shaqada maskaxda.
Dareemid walaac ama nasasho la'aan.
Beerka dufanka leh, oo sidoo kale loo yaqaan cudurka beerka dufanka leh ee aan khamriga lahayn (NAFLD)
Necrosis kelyaha dhiig baxa.
Choline waxay kobcin kartaa shaqada xusuusta, waxay hagaajineysaa koritaanka maskaxda waxayna daaweyn kartaa welwelka iyo xanuunada kale ee maskaxda
Ilaha cuntada ee ugu qanisan choline waa hilibka, kalluunka, caanaha, iyo ukunta. Khudaar badan, khudaar, iyo miraha oo dhan waxaa ku jira choline sidoo kale, sidaa darteed waxaa jira fursado badan oo loogu talagalay dadka cuna khudradda ama cuntooyinka dhirta ku saleysan.
Fiitamiinada badankood caadi ahaan kuma jiraan choline.
In kasta oo cuntooyinka hodanka ku ah choline - beerka, ukunta, iyo hilibka casaanka ah — ay u muuqdaan inay aad uga sarreeyaan dufanka buuxa, haddana choline waxaa sidoo kale laga heli karaa cuntooyinka ku yar dufanka buuxa sida salmon, cod, tilapia, naaska digaagga, iyo digiraha.
Waqtigan xaadirka ah, ma jiro tijaabo caafimaad oo rasmi ah oo loo isticmaali karo in lagu aqoonsado dadka choline ka liita. Qiyaasta 'Plasma choline', 'betaine', iyo 'phosphatidylcholine' ayaa hoos u dhacay bina-aadamka oo la siiyay cunno ay ku yar tahay choline-ka, laakiin waxay yihiin plateau ka dib markii ay hoos u dhaceen 30% -50%.
Waxay u leedahay dhadhan yar oo macaan oo iyada uun loo ogaan karo. Xaqiiqdii maahan beddel sonkor qof walba.
Daraasado indho-indheyn oo ballaadhan ayaa isku xiraya qaadashada qaddarka iyo heerarka dhiigga si loo wanaajiyo shaqada maskaxda, oo ay ku jiraan xusuusta wanaagsan iyo ka shaqeynta Kordhinta leh 1,000 mg maalin kasta waxay u horseedday xasuusta hadalka muddada-dheer iyo muddada-dheer ee dadka waaweyn ee da'doodu udhaxeyso 50-85 ee xasuustoodu liidato.
Citicoline waa magaca qayb ka kooban dhisme isku kiimikaad ahaan isku mid ah cytidine-diphosphocholine (CDP choline). Farqiga kaliya ayaa ah in CDP choline uu si dabiici ah ugu dhaco bina-aadamka, citicoline-na waa qaabka laga helo nafaqada.
Citicoline wuxuu xoojiyaa isgaarsiinta gacanta iyadoo la kordhinayo helitaanka neurotransmitters, oo ay kujiraan acetylcholine, norepinephrine, iyo dopamine. Erayo fudud, qeybta choline ee citicoline waxaa loo isticmaalaa in lagu abuuro acetylcholine, taas oo ah neurotransmitter aasaasiga guud ee maskaxda aadanaha.
Phosphatidylcholine waa kiimiko ku jirta ukunta, soyska, mustard, gabbaldayaha, iyo cuntooyinka kale. Ereyga "phosphatidylcholine" mararka qaarkood waxaa loo isweydaarsadaa "lecithin," in kastoo labadoodaba ay kala duwan yihiin. Choline waa qayb ka mid ah fosfatidylcholine, oo ah qayb ka mid ah lecithin.
Daraasaddan ballaaran ee ku saleysan dadweynaha, uruurinta choline waxay si xun ula xiriirtay astaamaha walwalka laakiin ma ahan calaamadaha niyadjabka.
Isbedelada heerarka plasma choline ama amino acids qaarkood waxay horseed u tahay isbeddelada heerarka maskaxda ee horudhacayaasha neurotransmitters-choline for acetylcholine, tryptophan for serotonin, and tyrosine for the catecholamines.
salivation xad dhaaf ah.
ur jidhka kalluun leh.
Waxaa lagu soo warramey in choline ay door muhiim ah ka ciyaarto dheef-shiid kiimikaadka; waxay u jajabisaa baruurta isticmaalka tamar ahaan. Tallaabadan choline waxay ka dhigeysaa mid qiimo leh ka hortagga xaaladaha sida beerka dufanka leh ama dufanka badan ee dhiigga ku jira.
Waxay ku keeni kartaa waxyeelo dadka qaarkood oo ay ka mid yihiin laab xanuun, madax xanuun, dawakhaad, iyo finan maqaarka ka soo baxa. Marka tallaal ahaan loo siiyo: Alpha GPC waa suurtagal in laga badbaado marka si habboon loo isticmaalo. Waxay u keeni kartaa waxyeelo dadka qaarkood oo ay ka mid yihiin laab xanuun, madax xanuun, hurdo la'aan, jahwareer, iyo casaan goobta duritaanka.
Noocyada ugu caansan ee cuntooyinka waa fosfatidylcholine (PC), fosfocholine, alpha-gpc, sphingomyelin, CDP-choline, iyo choline bilaash ah. Phospholine, choline bilaash ah, iyo alpha-gpc waa biyo lagu milmi karo, halka fosfatidylcholine iyo sphingomyelin ay yihiin kuwo dufanku ku milmi karo.
Alpha Brain waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu badbaado badan nootropic. Si kastaba ha noqotee, waxaad la kulmi kartaa waxyeelooyin yar yar marka la eego isdhexgalka daawada ama markaad wax ka badan u baahan tahay. Taasi waa sababta ay tahay inaad ugu dhegnaato qiyaasta lagu taliyey waana inaad kala tashataa dhakhtarkaaga kahor intaadan qaadan wax dheeri ah oo nootropic ah.
Dhammaan daraasadihii la sameeyay si ay u falanqeeyaan saameynta kala duwan ee Alpha GPC ee howlaha jirka ee kaladuwan waxay si wada jir ah isugu raacsan yihiin in xarunta, markii lagu dhammeeyo xadka ay maalinle tahay, gabi ahaanba waa amaan. Si kastaba ha noqotee, qaadashada xad dhaafka ah ee Alpha GPC waxay kuu horseedi kartaa waxyeelooyin, sida madax xanuun, wadne xanuun, hurdo la'aan iyo dawakh. Waxaa taas ka sii muhiimsan, haweenka uurka leh iyo kuwa nuujinaya waa inaysan cunin xaruntaan maadaama aan daraasad la sameynin ilaa iyo hadda si loo darso saameynta Alpha GPC ay ku leedahay haweenka uurka leh. Sidoo kale, haddii aad leedahay xaalad hore u jirtay, waxaa ugu wanaagsan inaad la tashato takhtarkaaga ka hor intaadan bilaabin wax kale oo Alfa GPC ah.
Laakiin waxaa jira waxyeellooyin soo raaca oo ay ka mid yihiin madax xanuun, welwel iyo hurdo la’aan.
Markii lagu qaato qaadashada lagu taliyay Alpha GPC si wanaagsan ayaa loo dulqaadan karaa. Dadka waaweyn badankood qiyaasta qiyaasta la aqbali karo way ballaadhan tahay; Qiyaasta isku-darka maalinlaha ah ee 300-1200 mg, markii lagu qaato hal ama laba qiyaasood, waa badbaado iyo hufnaan.
Si xun u adeegsiga nootropics - walax kasta oo wax ka beddeli karta, hagaajin karta, ama kordhin karta waxqabadka garashada, inta badan iyada oo loo marayo kicinta ama xannibaadda qaar ka mid ah neerfaha gudbiya - waxay noqon kartaa mid khatar ah oo u nugul maskaxda aadanaha, iyo shakhsiyaad gaar ah oo leh taariikh maskaxeed ama adeegsi walax cilado.
Dhowrkii sano ee la soo dhaafay, dadku waxay bilaabeen inay fiiro gaar ah u yeeshaan jirkooda. Wadahadalka ku saabsan caafimaadka maskaxda si weyn ayuu usii xoogeystay maaddaama maskaxdu u adeegto sidii xarun xakameysa jirka oo dhan iyo cillad kasta oo maskaxda ku dhacda waxay u horseedi kartaa saameyn xun. Choline waxay door muhiim ah ka ciyaartaa ilaalinta caafimaadka maskaxda iyo hagaajinta shaqada maskaxda. Sidaa darteed, nafaqooyin badan oo nafaqo leh ayaa hadda ku jira iskudhafyo siiya choline jirka. Mid ka mid ah waxyaabaha noocaas ah waa Alpha GPC.
Qaxwada waxaa loo tixgeliyaa nootropic maxaa yeelay waxay ka kooban tahay kafeyn. Caffeine waa nootropic caan ah oo ugu horreyn xoojiya feejignaanta iyo niyadda. Nootropics, oo sidoo kale loo yaqaan "daroogada smart" waxay gacan ka geysaneysaa hagaajinta howlaha garashada, waxay xoojineysaa xusuusta iyo waxqabadka maskaxda.
Daraasad la sameeyay si loo fahmo saameynta alfa GPC on soo saarka korontada ayaa shaaca ka qaaday in qiyaasta 600 mg ay keento koror dheecaanka hoormoonka koritaanka. Marka, qiyaasta caadiga ah ee alfa GPC badanaa waa inta udhaxeysa 300 ilaa 600 mg waxaana ciyaartooyda lagula talinayaa inay ku ekaadaan xadka sare.
Si kastaba ha noqotee, marka ay timaado daaweynta hoos u dhaca garashada, ku dhowaad dhammaan daraasadaha falanqeeyay saameynta Alpha GPC ee waxqabadka garashada ayaa isticmaalay qiyaasta caadiga ah ee 1200 mg maalintii, oo loo qaybiyay saddex qiyaasood oo ah 400 mg. Hoos u dhac ku yimaad qaddarkan xaddiga ah ma lahaan karo saameyn la mid ah xaddiga 1200 mg maalintii. Sidaa awgeed, bukaannada la il daran cudurka Alzheimers, waallida, iyo TIA waxaa badanaa lagula taliyaa inay ku dhegaan qiyaasta 1200mg / maalin.
Sababtoo ah noocyadeeda kala duwan ee faa'iidooyinka caafimaadka garashada, CBD waxaa loo tixgeliyaa nootropic. Baarayaasha badan waxay ku faraxsan yihiin suurtagalnimada CBD inay ka caawiso caqabadaha guud ee maskaxda sida welwelka, niyadjabka, iyo walbahaarka.
① Waxay wax ku ool u tahay Daawaynta Cudurka Alzheimers
Sanadihii la soo dhaafay dhowr daraasadood ayaa la sameeyay si loo barto awoodda xaruntan si ay uga caawiso daaweynta cudurka Alzheimers. Mid ka mid ah daraasadaha noocan oo kale ah ayaa shaaca ka qaaday in Alpha GPC ay wanaajineyso heerka acetylcholine ee maskaxda. Acetylcholine wuxuu kuxiranyahay shaqada maskaxda oo kor looqaaday iyo garashada oo la hagaajiyay. Muhiimad ahaan, daraasadda ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in dadka qaba dhiig-karka, Alpha GPC ay yareeyeen caabuqa hareeraha xididdada dhiigga ee maskaxda, taas oo horseedaysa hagaajinta shaqada maskaxda.
Cilmi baaris ayaa sidoo kale muujisay in bukaanada la ildaran cudurka Alzheimers ay ka faa’iideysan karaan qaadashada 1200 mg ee alfa GPC maalin kasta. Qiyaastan waxaa lagula talinayaa muddada 3 illaa 6 bilood waxayna si weyn u hagaajineysaa xirfadaha fekerka ee dadka ka cabanaya cudurkan halista ah.
② Waxay ka caawisaa daawaynta waallida
Dad badan ayaa ku jahwareersan ilowga iyo cudurka Alzheimers. Marka, waa lagama maarmaan in la dhiso kala duwanaanshaha u dhexeeya labadooda marka hore. Dementia waa erey guud oo loo adeegsado in lagu sharaxo hoos u dhac ku yimaadda awoodda maskaxeed ee qofka illaa heer uu hoos u dhacu bilaabo inuu farageliyo shaqooyinka maalinlaha ah ee qofka. Alzheimers ma ahan waallida laakiin waa cudur gaar ah oo ka mid ah sababaha ugu badan ee waallida.
Sannadihii la soo dhaafay, daraasado dhowr ah ayaa la sameeyay si loo darsado saameynta ay alpha GPC qaadasho ku leedahay bukaanka jahawareerka. Hal daraasad ayaa shaaca ka qaaday in qaadashada alfa GPC ee joogtada ah ee lix bilood ay kordhisay garashada iyo u shaqeynta bukaanada qaba jahawareerka sahlan ama dhexdhexaad ah. Sidoo kale, daraasad kale waxay la xiriirtay isticmaalka joogtada ah ee alfa GPC iyo garashada oo hagaagtay ee bukaannada qaba cudurka 'dementia' iyo cudurka maskaxda ku dhaca. Gabagabadii, dadka waallida qaba ayaa si weyn uga faa'iideysan kara qaadashada 1000 mg ee Alpha GPC maalin kasta. Bukaannada noocaas ah, qaadashada Alpha GPC waxay la xiriirtaa dabeecad hagaagtay, niyadda, iyo garashada.
③ Waxa loo isticmaalaa in lagu daweeyo Weerarada Ischemic Ku-meel-gaadhka ah
Weerarka iskeemiska ee 'Transient ischemic' (TIA) waa qaybo kooban oo ka mid ah nabaad-garaaca neerfaha, oo ay badanaa sababaan kala go 'ku keenida dhiigga maskaxda iyo isha. Weerarrada ischaemiska ku-meel-gaarka ah waxay badanaa socdaan dhowr daqiiqo oo keliya laakiin waxaa loo arkaa inay yihiin kuwa horudhaca istaroogga. Daraasad ayaa la sameeyay si loo darso saamaynta Alpha GPC ee ku dhaca maskaxda iyo bukaanka TIA. Daraasadu waxay shaaca ka qaaday in dadka qaatay 1200-mg Alpha GPC mudis maalin kasta muddo 28 maalmood ah, oo ay ku xigto 1200 mg / maalintii Alpha GPC (iyada oo loo marayo cabirrada afka ah) muddo lix bilood ah, waxay muujiyeen xirfado fikir fiican iyo sidoo kale ka soo kabasho wanaagsan TIA. .
④ Waxay Samaynaysaa Kaabista Nootropic ee Waxtarka leh
Acetylcholine waa kiimiko dabiici ah oo u shaqeysa sida neerfaha loo yaqaan 'neurotransmitter' waxayna muhiim u tahay xusuusta iyo shaqooyinka barashada. Alpha GPC waxay ku kordhisaa kiimikadan maskaxda dhexdeeda, taasina waxay horseed u tahay kor u qaadista xusuusta iyo garashada. Markaa, alpha GPC waxaa badanaa loo isticmaalaa inay qayb muhiim ah ka noqoto cuntada kaabis ah ee nootropic.
⑤ Waxay wanaajisaa Waxqabadka Ciyaaraha
Ciyaaraha, alfa GPC qaadashada waxay la xiriirtaa yaraynta jimicsi-yaraanta choline. Tan ka sii muhiimsan, waxaa sidoo kale lala xiriiriyaa kororka soosaarka hoormoonka iyo waxqabadka adkaysiga dulqaadka. Sidaas darteed, tababarayaasha iyo tababarayaashu badanaa waxay kula taliyaan ciyaartooyda inay cunaan alfa GPC si ay u gaaraan waxqabadka muruqyada oo la xoojiyay.
(1). Maktabadda Qaranka ee Daawada ee Machadka Qaranka ee Caafimaadka, Gatti G, Barzaghi N, Acuto G, Abbiati G, Fossati T, Perucca E., 1992 Sep; 30 (9): 331-5.
(2). Doggrell SA & Evans S; Evans (Oktoobar 2003). "Daaweynta jahawareerka qaba habka neurotransmission modulation". Aragtida Khubarada Baaritaanka Dawooyinka. 12 (10): 1633-1654.
(3). Parnetti, Lucilla; et al. (2007). "Hordhaca Cholinergic ee daaweynta cillad garashada: habab aan waxtar lahayn ama u baahan dib-u-qiimeyn?". Joornaalka cilmiga neerfaha. 257 (1-2): 264–9.
(4). Safarka si loo sahamiyo eg.
(5). Oleoylethanolamide (oea) - usha sixirka ee noloshaada.
(6). Anandamide vs cbd: kee baa caafimaadkaaga ugu fiican? Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato iyaga!
(7). Waxkasta oo aad ubaahantahay inaad ka ogaato waxyaabaha ku saabsan nicotinamide riboside chloride.
(8). Magnesium l-threonate supplements: faa'iidooyinka, qiyaasta, iyo waxyeelooyinka.
(9). Palmitoylethanolamide (digir): faa'iidooyinka, qiyaasta, isticmaalka, kaabista.
(10). 6 faa iidooyinka caafimaad ee ugu wanaagsan ee supveverol supplements.
(11). 5 faa iidooyinka ugu sareeya ee qaadashada fosfatidylserine (ps).
(12). 5 faa iidooyinka ugu sareeya ee qaadashada pyrroloquinoline quinone (pqq).
(13). Kaabista da'da ee ugu wanaagsan ee nikotiinamide mononucleotide (nmn).
Alpha-gpc hubaal waa mid ka mid ah nootropics-ka iigu fiican aniga. Waxaan isticmaalaa 150mg maalmaha aan rabo kobcinta maskaxda.
Waxa aan aad ula yaabay waxay ahayd awooda kor u qaadida waxqabadka cayaaraha iyo soo kabashada sifiican. Ciyaaryahan kubbadda koleyga, macno ahaan waa PED hubaal. Waxaad dareemeysaa xakameyn badan oo jirkaaga ah iyo sida uu udhaqaaqayo, dhaqdhaqaaqa muruqyada ganaaxa iyo iskuduwida ayaa si weyn kor loogu qaaday.
Kaliya waxaan qaataa 300mg. Ku qaadatay 2 bilood oo toos ah. Niyad jab la'aan. Kaliya tamarta jimicsiga.
Waxaan qaataa 300mg subax kasta maalin kasta. Waxaan is arki lahaa aniga oo xoogaa niyad jabsan toddobaadyo ka dib sannadihii ugu horreeyay, markaa waxaan qaadan lahaa nasasho dhawr maalmood ah. Hadda markaan nasto oo aan ku soo noqdo, way igu sii adkaanaysaa waxaanan helayaa riyooyin aad u habboon habeen ama laba. Ma aha hurdo aad u qoto dheer. Maaha waxa aan ugu jeclahay. Waxay iga xalisay arin cimri dheer oo ceeryaamo maskaxeed ah aniga. Hadda waxaan diiradda saarayaa oo waan feejiganahay bulsho ahaan, waxaanan haystaa tamar jireed oo badan. Waan aqoonsanahay qof kasta oo kale oo dhaha waan ku niyad jabsanahay - waana qirayaa in diiqad aad u badan oo choline ah ay tahay waxa adduunka ugu xun oo runtiina maalintaada burburin doonta. Markaa haddii qofna uu akhrinayo tan oo uu ku fekerayo isku daygiisa, ka bilow qiyaasta ugu yar ee suurtogalka ah, laga yaabee xitaa maalin kasta ama ka dheer, oo isha ku hay sida aad dareemeyso.
Aniga ahaan wax weyn ayey ii shaqeysaa. Si daacadnimo ah uma aanan fileynin wax badan laakiin markasta oo aan qaato waxaan dareemaa feejignaan badan iyo xusuus badan.
Wax badan ayaan barto sidaa darteed saameyntooda aniga ayaa si muuqata iiga muuqday. Waxaan qaataa 150-300 mg.